Soomaali Hanti Farabadan Looga Boobay Dalka Koonfur Afrika - Radio...
Soomaali Hanti farabadan looga boobay dalka Koonfur Afrika – Radio…
Khasaaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo xooggan ayaa ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koofur Afrika kasoo gaaray rabshadihii ka dhacay meelo kamid ah dalkaas.
Meelaha ugu daran ee khasaaraha hantiyadeed uu kasoo gaaray rabshadihii ka dhacay dalka Koonfur Afrika Ganacsatada Soomaalida ayaa waxaa kamid ah degaano ku yaal duleedka Magaalada johanispeg iyo degaano kale.
Xasan Cumar & Maxamed Suufi Axmed oo kamid ah Ganacsatada Soomaaliyeed ee ku hanta waayay boobkii ka dhacay gobolka Qowteyn ayaa sheegay in boobka uu ahaa mid an loo kala saarin Soomaalida, Ajaanibta kale iyo waliba Ganacsatada ku dhashay dalkaas.
Wararka Maanta : TPLF oo Sheegtay In ay La Wareegeen Magaalada Korem
Sidoo kale waxaa ay sheegeen in laga boobay hanti lagu qiimeeyay in ka badan 800, 000 oo Dollar, kadib markii burcad Koonfur Afrikan ah ay boobee, sidoo kalena ay jiran ganacsato kale oo hantidooda la boobay.
Rabshadihii ka dhacay magalyin ka tirsan dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa uu saameyn weyn ku yeeshay Soomaalida ku ganacsatada dalkaas, iyada oo ay jiraan ilaa 5 Dhalinyaro Soomaali ah oo rashadaha lagu dilay.
Related Topics:https://Wararka-Maanta.netWararkaWararka Maanta
Maamulka Dowlad degaanka Soomaalida oo xir xiray dad taageerayay TPLF…
SAWIRO:-Wasiirka difaaca & Arimaha Dibadda Airland oo Muqdisho soo…
Gabadhaan oo lagu Magacaabi jiray Muniiro Axmed ayaa muddo Saddex Cisho ah ka maqneyd Qoyskeeda, hayeeshee baadi goob dheer kadib waxaa meydkeeda laga helay webiga Mississippi ee hoos mara buundada dadka ay u damaashaad tagaan ee Magaalada Minneapolis , halkaas oo ay joogtay markii cid war ugu dambeeysay.
Ciidanka gargaarka deg-dega ah iyo booliiska magaallada Minneapolis ayaa meydka Munira ka soo saaray webiga Mississippi, waxaana ay sheegeen inay wadaan baaritaan la xiriira dadka ka dambeeyay dilkeeda ama inay iyada Webiga ku dhacday.
Wararka Maanta : Maxay ka wada hadleyn RW Rooble iyo Amiirka Qatar? - Wararka Maanta
Qaar kamid ah Qoyska Alle ha u Naxariistee Muniira ayaa dhankooda sheegay inay u maleeynayaan in Gabadhooda Webiga lagu riday, hayeeehee ay jawaab deg deg ah ka sugayaan Ciidamada Booliska ka howlgalla Magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka.
Dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxaa siyaabo kala duwan loogu dilay Magaalada Minneapolis, iyada dilkaan kii ka horeeyay loo geystay todobaadkii hore Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Maxamed Xuseen Xasan.
Wararka Maanta : Kenya oo xal raadinaysa afduubka ku soo badanaya - Wararka Maanta:...
Previous articleDHAGEYSO:- Warka Subax ee Wararka Maanta 25-07-2021
Arday Soomaali ah oo ka soo cararay dagaallada ka socda gobolka…
Iyadoo ay dagaallo ka socdeen Gobolka Tigray ee Waqooyiga dalka Itoobiya, ayaa waxaa halkaasi u suurta gashay inay isaga soo baxaan qaar ka mid ah arday Soomaali ah oo Jaamacad ka dhiganayay magaalada Maqalle ee xarunta gobolka Tigreeda.
Ardayda ay u suurtagashay in ay ka soo baxsadaan colaadda halkaasi ka jirta waxaa ka mid ah Saciid Macalin Bashiir oo jaamacad ka dhiganayay magaalada Maqalle.
Saciid waxaa uu sheegay inay tageen degaanka Amxaarada kadib markii la waayay cid bixisa dhaqaalaha ku baxaya waxbarashadooda markii Hay’adihii isaga baxsadeen
Sidoo kale waxaa uu ugu baaqa Ardayda kale ee ku sugan Magaalada Maqalle in aysan naftooda haligiin, isla markaana ay isku dayaan badnaaeinta naftooda iyo helids waxbarasho lamid ah middi au baran jiteen.
Golaha Ammaanka oo Cambaareeyay Tallaabo uu qaaday Turkiga – Radio…
Golaha Ammaanka ee QM ayaa Jimcihii cambaareeyay qorshaha ay dowladda Turkey iyo hoggaamiyeyaasha Turkish-ka ah ee waqooyiga Qubrus ku doonayaan in ay qeyb ahaan dib ugu furaan magaalada cidlada ah ee Varosha, wuxuuna Goluhu ku baaqay in si dhakhsa ah tallaabadaasi looga laabto.
Maamulka Turkish-ka ee Qubrus oo ay Ankara taageerto ayaa Talaadadii sheegay in qeyb ka mid ah magaalada Varosha oo ah aag militari iyo qeyb la sheegay in dib loogu celiyo Qubrus-ta Giriigga ah ay hoos geyn doonaan maamul rayid ah, islamarkaana ay u furi karaan dib u dejin.
Wararka Maanta : Guddoomiye ku xigeenka amniga gobolka Banaadir oo Puntland ku taageeray...
“Golaha Ammaanku waxa uu si degdeg ah ugu baaqayaa in dib looga laabto tallaabadan iyo dhammaan tallaabooyinka ku saabsan Varosha ee la qaaday ilaa bishii October ee 2020-kii,” ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay golahan ka kooban 15-ka dal.
Tallaabada ay qaadeen Qubrus-ta Turkiga ah ayaa sababtay fal-celin caro leh oo ka timid dowladda caalamku aqqoonsan yahay ee Qubrus-ta Giriigga ah, waxaana sidoo kale diidmo kala horyimid quwadaha reer galbeedka, oo uu ugu horreeyo Mareykanka oo ku tilmaamay tallaabadan “mid aan la aqbali karin.” Turkiga ayaa dhegaha ka fureystay dhaliilaha loo jeedinayo.
“Golaha Ammaanku waxa uu hoosta ka xarriiqayaa baahida loo qabo in laga fogaado ficil kasta oo hal dhinac ah oo aan waafaqsanayn go’aannadii Golaha, taasi oo xiisad ka abuureysa jasiiradda islamarkaana waxyeellaynaysa rajada laga qabo in heshiis la gaaro,” ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Golaha Ammaanka.
Qybrus ayaa Arbacadii codsi ka dhan ah go’aanka uu qaaday maamulka Qubrus-ta Turkish-ka ah u gudbisay Golaha Ammaanka.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkey ayaa diiday baaqa ka soo baxay Golaha Ammaanka iyo dalal kale oo dhowr ah, waxayna sheegtay in ay yihiin sheegashooyin aan sal laheyn, islamarkaana aan waafaqsaneyn xaqiiqoyinka ka jira Qubrus.
Wararka Maanta : Jacob Zuma oo habeenkii ugu horreeyey xabsiga ku hoyday - Radio...
“Bayaannadani waxa ay ku saleysan yihiin dacaayadda Qubrus-ta Giriigga ah, iyo sheegasho aan sal laheyn,” ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay Turkey.
In kabadan 100 Ruux oo ku geeriyooday Roobab ka da’ay dalka Hindiya -…
Ugu yaraan 110 ruux ayaa ku geeriyooday daadad ka dhashay roobab xooggan oo ka da’ay gobalka Maharashtra ee dhaca galbeedka wadanka hindiya.
Daadii ka dhashay Roobabka ayaa waxaa ay ku dhufteen boqolaal tuulo kuwaasoo burburiyay guryo badan oo ku yaalay gobolkaasi, waxaana socda gurmad culus oo lagu samata bixinayo dadka ay mashaqada ku dhacday.
Malatariga dalka hindiya ayaa si weyn ugu qeyb qaadanaya howlaha lagu badbaadinayo dadka ku waxyelloobay gobolkan sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan Milatariga Dowladda Hindiya.
Wararka Maanta : Raysal wasaaraha Soomaaliya oo goordhaw dib ugu soo laabtay magaalada...
Muddo tobonaan sanno ah ayaa waxaa wayeello kala kulmayeen gobaladda ku yaala galbeedka wadanka Hindiya Roobab culus oo inta badan halkaasi ka da’a bisha july ee sannadka kasta.
Quburo ku xeel dheer arrimaha deegaanka ayaa sheegay in sababaha ugu waa weyn ee keenay Roobabka halkaasi ka da’a ayay ku micneyeen cimilada dunida ee sii kululaaneysa.
Saraakiil ka tirsan hay’adda gurmadka deg deg ah ayaa xusay in dhibaatada ugu badan ay ka dhalatay waxyeeladii daadadka ee ka soo bilawday labo degmo oo ka tirsan gobalka.
Wararka Maanta : Ethiopia oo heshiis xasaasi ah la gashay Ruushka iyo ujeeddada ka damb...
Dowladda ayaa sheegtay in dadka nugul laga daadad gureeyay deegaanada ugu daran ee ay dhibaatada ka jirto.
Ra’iisul wasaaraha wadanka hindiya narendra modi, ayaa sheegay in uu si weyn ugu xun yahay dadka ku dhintay Roobabka iyo daadadka, isagoo intaasi ku daray in ay gargaar la gaarsiin doono gobalka.
Mareykanka oo sheegay inay duqeymo horleh ka fuliyeen Soomaaliya -…
Waaxda gaanshaandhiga Maraykanka ee Pentagon ayaa xaqiijisay in duqaymo ka dhan ah Alshabaab ay Jimcihii ka fulisay Soomaalia – hawgalka oo ka dhacay dowlad goboleedka Galmudug ayaa ahaa kii labaad ee toddobaad gudihiis lagu bartilmaameedsanayo kAl-Shabaab.
Duqaymahaas ayaa ah kuwii ugu horreeyey ee Soomaaliya ka dhaca tan iyo markii uu maamulka la wareegay madaxweyne Biden waxayna arrintaasi wax xoogaa buuq ah ka dhalisay Washington.
Khamiistii, seddex senetar oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa ku dhaleeceeyay maamulka Biden in uu ku guuldareystay inuu raadsado ogolaansho duqeyntii ugu horeysay ee diyaaradaha aan duuliyaha laheyn, waxayna sheegeen in loo baahan yahay isla xisaabtan ku aaddan ammaanka qaranka.
Deegaannada Gobolka Mudug ee uu duqeymaha ka fuliyay Mareykanka ayaa waxaa xilligan ka socda howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab oo ay fulinayaan Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Daraawiishta Dowlad Goboleedka Galmudug.
Previous articleSAWIRO:-Ciidamo ka tirsan NISA oo howlgal gaar ah fuliyay
Ilhaan Cumar oo madaxweyne Biden ka codsatay arrin ku saabsan…
Wararka Maanta : Tigrayga oo sheegay inay qabsadeen magaalo kale - Wararka Maanta:...
Wararka Maanta : Wada-hadal guuldareystay oo Xalay Zoom-ka ku dhex maray Rooble & Maamu...
Wararka Somali22 mins ago
Wararka Somali44 mins ago
Wararka Videos3 hours ago